မောင်အောင်မွန် ● ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၆၆) - MoeMaKa Media
Home / Community / Literature / Maung Aung Mon / မောင်အောင်မွန် ● ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၆၆)
မောင်အောင်မွန် ● ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၆၆)
Community, Literature, Maung Aung Mon
(မိုးမခ) ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၉
အဖေမရှိ အဖေမသိသူများအ၏ အဖေများနေ့
ကျနော်တို့သည် မိမိအားနို့တိုက်သူ အမေ၏မျက်နှာကို ဦးဆုံးမှတ်မိမည်၊ အမေရယ်လို့သိလာမည်။ ထို့နောက် အဖေကို မှတ်မိမည်၊ အဖေရယ်လို့သိလာမည်။ မိမိဘ၀ အဖေ့ထံက စတင်မှန်းသိသည့်တိုင် အမေနှင့်သာ ပိုနီးစပ်မြဲပါ။ အမေဟု တကြိမ်ခေါ်ခြင်းသည် အဖေဟု သုံးကြိမ်ခေါ်ခြင်းနှင့် ညီမျှကြောင်းဆိုသော ကျမ်းစာကိုဖတ်ဖူးပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစော မိဖဟူ၍ အမိနှင့်အဖဒွန်တွဲ ချစ်ခင်လေးစား ကြည်ညိုကျေဇူးတရားထားရှိရေးကို ယဉ်းကျေးသော လူ့ အသိုက်အဝန်းရယ်လို့ စတင်ကတည်းက ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ သည်လိုနှင့်ပင် အမေများနေ့--၊ အဖေများနေ့ စသဖြင့် ကျင်းပလာခဲ့ကြသကဲ့သို့ မြန်မာပြည်တွင်လည်း လိုက်လုပ်ကြ၏။
စွန့်ပစ်ကလေးများ၊ ထိုင်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြားက အမှိုက်ပုံများ၌ စားစရာရှာနေရသော ကလေးများခမျာ အဖေနေ့ဆိုတာ သိရန်ဝေးစွ၊ သူတို့မှာအဖေရှိလား၊ အဖေကိုသိလား စသဖြင့် ကျနော့ခေါင်းထဲဝင်လာ၏။ မျက်စိအခြေအနေကြောင့် အသစ် အရှည် မရေးနိုင်၍ ရေးခဲ့ဖူးသည့်ထဲက လူနှစ်ယောက် အကြောင်းဖြစ်တောက် တင်ပြလိုက်ပါရစေ။
+++++ အမေရိကန်မှာ ဘစ်လ်ဆိုတဲ့ကောင်လေး နေ့တိုင်းမြင်နေရတာက တချိန်လုံးအရက်သောက်နေတဲ့ သူ့ပထွေး။ ကျောင်းအပ်တော့လည်း ပထွေးနာမည်နဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်မှာထက် ကျောင်းမှာသာပျော်၊ စာတော်မှ ဖြစ်မယ်၊ ပညာရေးသာ သူ့ဘဝဆိုတာနားလည်လာ၊ မြို့တော် ဝါရှင်တန်ဒီစီသို့ လေ့လာရေးခရီးထဲပါ၊ အမ်ဖြူတော်ကိုမြင်လိုက်တော့ ... ဟ ... ကြီး ကျယ် ခမ်းနားလိုက်တာလို့ ခပ်ကျယ်ကျယ်ပြောမိရာ၊ မင်းသမတဖြစ်ရင် နေရမယ်လို့ လိုက်ပြသူကဆိုတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းစေ့ ကာ ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ ၁၆ နှစ်မပြည့်သေး၍ အရက်ဝယ်ခိုင်းမရလို့ ငြူစူနေတဲ့ ပထွေးနဲ့ဝေးဖို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်က ပညာသင်ဆုရတယ်။ ၄၆ နှစ်အရွယ်မှာတော့ သူ့ရဲ့အိမ်ဖြူတော်အိပ်မက် ပြည့်ကာ၊ သမတဖြစ်လာတဲ့ ဘစ်လ်ကလင်တန်ရဲ့ နောက်ထူးခြားချက်က ယနေ့အထိ သူ့လျှာ အရက်နဲ့ မထိဖူးခြင်းပါ။ +++++
၁၉၁၃ ခု၊ ဂျာမနီမှာ Herbert ဆိုတဲ့ကောင်လေး ကြားဖူးတဲ့ သူ့အဖေနာမည်ကို ဟုတ်/မဟုတ်မသိ၊ စာရေးမ မိခင်လက်ပေါ်ပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ ကျောင်းနေခဲ့ရတယ်။ ဂျာမန်လူမျိုး မြင့်မြတ်တယ်ဆို? ဘုရားသခင်က အထူးဖန်ဆင်းပေးထားလား? အဖေအရင်း ကိုတောင် မမြင်ဖူးတဲ့ငါ ဂျာမန်ဖြစ်တာနဲ့ အလိုလိုမြင့်မြတ်နေပြီလား? Herbert ထပ်တလဲလဲမေး မပြတ်တွေးရင်း သတင်း ထောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဟစ်တလာရဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ၊ နာဇီတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့် ရက်စက်ပုံတွေ သတင်းရေးတဲ့အခါ ထောက် လှမ်းရေးတွေ အနံ့ခံလာလို့ အန္တရာယ်ကြီးလာပြီ။ အဲဒီမှာတင် Willy Brandt ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်၊ မရတဲ့အဆုံး နော်ဝေးကိုထွက်ပြေး ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရင်း၊ ၁၉၄၅ ခုကျတော့ ဆိုဗီယက်၊ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ဂျာမနီကိုပြန်လာတယ်၊ ၁၉၆၉ ခု၊ အနောက်ဂျာမနီ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတော့သူ့ရဲ့ Ostpolitik ခေါ် အရှေ့ဥရောပနဲ့ သင့် မြတ်ရေးဝါဒကနေ အရှေ့ဂျာမနီနဲ့ ပေါင်းစည်းရေးလမ်းစဖြစ်လာ ၊ပြာပုံကနေ စီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာ၊ လူမည်းတွေနိုင်ငံသားဖြစ်လာပြီ။+++
အဖေမသိ အဖေမရှိ မြန်မာကလေးများ ဒီလူနှစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်နိုင်ကြရင် ကောင်းလေစွလို့ အဖေနေ့တွင် တွေးမိ ကြောင်းပါ။
(လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က ရေးခဲ့တာပါ)
၂၀၁၆ ခု၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက် (အဖေနေ့)။
မောင်အောင်မွန် ● ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၆၆) Reviewed by Aung Htet on 11:04 AM Rating: 5